The Ab Presents Nepal » तेरिया मगरको “तिम्रो मायाले बाँधेर राख”कभर गित सार्बजनिक! (भिडियो हेर्नुहोस)
तेरिया मगरको “तिम्रो मायाले बाँधेर राख”कभर गित सार्बजनिक! (भिडियो हेर्नुहोस)
तेरिया मगर नेपालको रुपन्देही जिल्लामा अवस्थित रुद्रपुर गाविस सुनगाभाचोककी वासिन्दा हुन् । उनलाई धेरैले तेरिया भनेर चिनेपनि पूरा नाम तेरिया फौजा मगर हो ।भारतीय रियालिटी शो ‘डान्स इन्डिया डान्स’ र ‘झलक दिखलाजा’ विजेता तेरिया फौजा मगर डान्समा मात्रै सिमित छैनन।उनि डान्सका साथै गायन क्षेत्रमा पनि अब्बल गायिका बन्दै गैरहेकी छिन। आफ्नो गायन प्रतिभालाई बेला बेलामा टिकटकमा उनले प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी टेरियाकी पहिलोपटक कभर गीतमा आफ्नो सुरिली आवाजले “तिम्रो मायाले बाँधेर राख” गीतको कभर गीतमा सजाएकि छिन।
तेरिया भन्छिन्अहिले नै फिल्म खेल्ने योजना छैन
चलचित्रको प्रिमियरमा पुगेकी तेरियाले आफूलाई चलचित्रले कतै रुवाएको, कतै हसाँएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले, केही समय अगाडि चलचित्र खेल्ने समाचार पनि आएको थियो । यस बिषयमा तेरियाले भनिन् :त्यो गलत कुरा थियो । चलचित्र खेल्न लागेको भन्ने खबर आउँदा म पनि अचम्मित भएकी थिएँ । अहिले त्यो बिषयमा कुनै सोच छैन ।
तेरियाले अहिले आफूले त्यस्तो केही काम नगरेको भन्दै सिकिरहेको नै सुनाइन् । कुन नायकसँग पर्दामा काम गर्न मन छ भन्ने प्रश्नमा तेरियाले भनिन्–त्यस्तो एक जना भन्ने त कोही पनि हुनुहुन्न । मलाई सबैसँग काम गर्न मन छ । सबै जना राम्रो हुनुहुन्छ ।